Cartoon Network App 2.0.1-20190702-android Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.1-20190702-android လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား Cartoon Network App
Cartoon Network App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျ (! သူတို့လေပြီးနောက်ရရှိနိုင်သောနေ့ရက်ကာလကို) ကိုနောက်ဆုံးအပြည့်အဝဖြစ်စဉ်များအပေါ်ကိုတက်ဖမ်းဒါမှမဟုတ်တချို့ Hilary ကလစ်များမှာအမြန် peek ယူချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျကာတွန်းကွန်ယက် App ကိုအနိုင်ရအEmmy®ဆုချီးမြှင့်အတွက်အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယိုများတန်ချိန်စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်!
hit ကာတွန်းကွန်ယက်မှဗီဒီယိုများ Watch ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go ကို !, အဆိုပါ Gumball ၏ Amazing World, စတီဗင်ဠာ, Clarence, စွန့်စားမှုအချိန်, ပုံမှန်ပြသပါ, ဦးလေးအဘိုး, Ninjago, Powerpuff မိန်းကလေးများ, တန်ခိုးကြီးသော Magiswords နှင့်များစွာသောပိုပြီးတူပြသထားတယ်။
သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောပြသထားတယ်သောကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ, ငါတို့ပဲသင်တို့အဘို့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုရောနှောတည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်စောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုဘယ်လောက်ရှိသလဲအဖြစ်ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသငျယူပါလိမ့်မယ်နဲ့မကြိုက်ဘူး, သင်၏ရောနှောပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ရမည်!
သော့ဖွင့် Episode-NO Login REQUIRED ဖတ်ကြည့်ပါ
မဆိုရဲ့ login သို့မဟုတ် authentication ကိုမပါဘဲသင်အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းကွန်ယက်ပြပွဲကနေအပြည့်အဝအရှည်ဖြစ်စဉ်များတစ်ရွေးချယ်ရေးခံစားပါ။ အခမဲ့ app ကို Download လုပ်ပြီးကြည့်ရှုစတင်! ့အဓိကသော့ချက်မရှိဘဲဖြစ်စဉ်များကြည့်ရှုပါ။ (ကသော့နှင့်အတူဇာတ်လမ်းတွဲများဆဲသင့် TV ပံ့ပိုးပေးသူအချက်အလက်လိုအပ်သည်။ )
APP ကိုသီးသန့် Premier
သူတို့ပင်လေထုထိမှန်မီကသီးသန့် Premiere ဖြစ်စဉ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ရှေ့သို့ဂိမ်းကိုရယူပါ။ app ကိုအပေါ်ပထမဦးဆုံးမြင်ရ!
ပါဝင်တီဗီပံ့ပိုး BendBroadband, Blueridge, Cable ကိုတစျခု, Cablevision အားလုံးဟာ Optimum, ပဋိညာဉ်စာတမ်း, Comcast, ကော့, ဟင်းလျာများ, DirecTV, EPB Fiber စက္ခုဗေဒ, Grande ဆကျသှယျရေး, Massillon Cable ကို TV က, Mediacom, Midcontinent ဆက်သွယ်ရေး, Suddenlink, Verizon က, wow ကို AT & T က U-ကျမ်းပိုဒ်ပါဝင် နှင့် Xfinity ။
သငျသညျဒီ app နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, advanced.platforms@turner.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။ သငျသညျသို့အပြေးနေတာသင်တို့ကဲ့သို့သုံးနေတယ်အဘယျသို့ device ကိုနဲ့ OS ဗားရှင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
* ဒီ app ကာတွန်းကွန်ယက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှအခြားထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများ, ရှိုးသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှု feature ကြော်ငြာများဆံ့နိုငျသညျ။
* လူကြီးများသော့ခတ်ဖြစ်စဉ်များကိုကြည့်ရှုဖို့သူတို့ရဲ့ cable သို့မဟုတ်ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားပံ့ပိုးပေးသူအချက်အလက်နှင့်အတူစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြရပါမည်။
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာတွန်းကွန်ယက်, Turner အသံလွှင့်စနစ်တစ်ဌာနခွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်, Inc ဒီဂိမ်းစုဆောင်းအောက်တွင်နှင့်ဆက်စပ်ကာတွန်းကွန်ယက်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဤအချက်အလက်အသုံးပြုသူတောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်ဥပမာ, ကိုအသုံးပြုစေခြင်းငှါ, အခြို့သော features တွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အားသာချက်ယူသုံးစွဲသူများကို enable; အကြောင်းအရာ personalize; ကြော်ငြာအစေခံ, ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ; နှင့်ကာတွန်းကွန်ယက်ကို web ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအခြားပြည်တွင်းရေးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒေတာများ privacy ကိုဥပဒေများဖြင့်ပဲ့ထိန်းနေကြသည်။ အီးယူဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိအခြားနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အသုံးပြုသူများအဘို့, ဒီ app ဂိမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နာတာရှည်ဖေါ်ထုတ်ကိုသုံးစေခြင်းငှါသတိပြုပါပါ။ ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအားဖြင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနဲ့ End User License Agreement ကိုလကျခံပါနဲ့သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါငျးတို့သအသုံးပြုသူများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုများအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ။ အဆိုပါသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနဲ့ End User License Agreement ကိုသင်၏ကြိုးမဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့် Google ချမှတ်မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ, အခြေအနေများသို့မဟုတ်မူဝါဒများအပြင်, Inc ကာတွန်းကွန်ယက်နှင့်၎င်း၏ affiliates ဆိုစုဆောင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်း, သို့မဟုတ် Google ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ဘို့တာဝန်မယူဖြစ်ကြ၏ သို့မဟုတ်သင့်ကြိုးမဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော။
Cartoon Network App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cartoon Network App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cartoon Network App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
superuser4k စတိုး 46.91k 28.61M
Cartoon Network App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cartoon Network App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.0.1-20190702-android
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.cartoonnetwork.com/legal/privacy/mobile.html
App Name: Cartoon Network App
Release date: 2019-07-09 17:52:34
လက်မှတ် SHA1: 38:FA:A6:A4:16:6A:59:77:B3:BB:BD:A7:00:03:BA:02:AF:96:54:71
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ross Cox
အဖွဲ့အစည်း (O): Cartoon Network
Cartoon Network App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ